Kal-fadhigii 4aad Ee Golaha 5,aad Ee Xildhibaanada DDSI Oo Furmay - Cakaara News
Kal-fadhigii 4aad Ee Golaha 5,aad Ee Xildhibaanada DDSI Oo Furmay
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco, 11ka January 2017. Waxaa maanta si rasmi ah hoolka shirarka ee qaryaan dhoodaan uga furmay kal-fadhigii 4,aad ee golaha 5,aad ee xildhibaanada DDSI.
Hadaba kal-fadhigan oo ay hogaaminayeen afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq iyo afhayeen kuxigeenka golaha xildhibaanada marwo Fardawsa Maxamed ayaa waxaa ugu horayn furay afhayeenka golaha xildhibaanada DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane maxamedrashiid Isaaq oo sheegay in kahor intaan lafurin kal-fadhigan laxaqiijiyo tirada kooramka soo xaadiray, halkaas oo lagu xaqiijiyay in 269kii xubnood ee uu goluhu kakoobnaa ay soo xaadireen 244 xubnood sidaasna uu kooramku kubuuxo.
Kal-fadhigan oo uu si rasmi ah ufuray afhayeenka golaha xildhibaanada DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane maxamedrashiid Isaaq ayaa golaha usoo jeediyay ajandayaasha horyaalay oo kala ahaa sidan:
1. Ansixinta hadal qoraalka kal-fadhiga 3aad
2. Ansixinta warbixinta xukuumada DDSI
3. . Iyo Bayaano kaladuwan
Golaha ayaana codbuuxa ku ansixiyay ajandayaasha iyo bayaanada kaladuwan ee lasoo dhigay kal-fadhigan. Iyadoo ugu horayn cod wadareed dhamaystiran lagu ansixiyay ajandaha koobaad ee ahaa ansixinta hadal qoraalka kal-fadhiga 3,aad.
Kadibna, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa si qotodheer usoo jeediyay warbixintii waxqabadka rubuca 2, aad ee SMka 2009TI oo dhinac walba taabanaysay isagoo kuxeel-dheeraaday dhinacyada horumarka gaar ahaan biyaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha, jidadka, buundooyinka, kafaaiidaysiga wabiyada iyo togaga iyo waliba waxkaqabashada abaaraha ay keentay isbadalka cimilada ee sababay roob yaraanta saamaysay bulshada gobolada qaarkood.
Ugudanbayna, golaha ayaa kadib markuu dhagaystay warbixinta waxqabadka 6dii ee lasoo dhaafay codbuuxa oo gacan taag ah ku ansixiyay in dhamaan waxqabadyada lasoo dhigay ay xaqiiqada kusalaysan yihiin islamarkaana kamarkhaati kacay. Waxaana intaa dheer, in dood kadib uu goluhu ansixiyay bayaanadii kaladuwanaa ee lasoo dhigay.